Ururka Al-Shabaab oo Rag Dhuxulaysata ah ku laayay Jubbada Hoose | SAHAN ONLINE
Ururka Al-Shabaab oo Rag Dhuxulaysata ah ku laayay Jubbada Hoose
MUQDISHO – Maleeshiyada ururka Alshabaab ayaa lagu soo warramaya in rag dhuxulaysato ah ay ku dileen deegaano katirsan Gobolka Jubbada Hoose,xili ay ku guda jireen jarida iyo gubista dhirta oo ay ka soo saaraan nolol maalmeedkoodi.
Deegaanka Yaaqbuul oo hoostaga Jasiiradda Kudhaa ee Gobolkaasi ayaa la sheegayaa in Alshabaab ay ku dileen 2 qof oo kamid ah dadka ka xamaasha jarista dhirta Dhuxusha laga sameeyo. waxayna Dadka Deegaanka u sheegay wakaaladda SONNA in Maleeshiyaadkaasi ay soo weerareen,islamarkaana ay dileen 2 qof oo ku howlanaa dhir jarista.
Walaal waxaa halka soo weeraray Alshabaab 2 qof ayay dileen, qof wuxuu ahaa nin halkaasi ganacsi ku lahaa iyo kan kalana wuxuu ahaa shaqaale marka goobtaasi ayay ku dileen,waxay diidayaan in xogtoodi la helo kadib la duqeeyo iyo in dhirta ayku dhuumaalaysanayaan dhamaato,meeshu waa meel duur ah, iyaga ma ogola dadka kale in ay noloshooda maareeyaan,taasi way ka soo horjeedaan”, Sidaasina waxaa SONNA u sheegay qaar kamid ah dadkii la kulmay dhibaatooyinka SHabaab.
Falalka dilka ayaa inta badan ka dhaca deegaanada ay ku xoogan yih Maleeshiyada Shabaab,iyagoo taasi ay uga hortagayaan in la helo macluumaad ku saabsan keymaha jiqda ah ay ku jiraan. Kaymahan ayaa bartilmaameed u noqday Kooxaha dhuxusha ka ganacsada ee u iibgeeya wadamada khaliijka, kuwasoo labo jibaaray dalabkooda dhuxusha laga keeno gobolka Jubbada hoose ee Maamulka Jubbaland.